Nabadoon soo bandhigay Xog ay dhibsadeen Puntland oo la xiray, Maamulka Putland ayaa dhalinyaro xoogsata ku qasbay inay sheegaatn Danbi aysan galin! | kowtharmedia.com
Home WARAR Nabadoon soo bandhigay Xog ay dhibsadeen Puntland oo la xiray, Maamulka Putland ayaa dhalinyaro xoogsata ku qasbay inay sheegaatn Danbi aysan galin!
Nabadoon soo bandhigay Xog ay dhibsadeen Puntland oo la xiray, Maamulka Putland ayaa dhalinyaro xoogsata ku qasbay inay sheegaatn Danbi aysan galin!
Ciidamada amaanka maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay mid kamid ah nabadoonada ugu caansan gobolka Bari kaa oo Warbaahinta la wadaagay dhibaato uu sheegay in loo geestay dhalinyaro xabsi ku xiran kuwaas oo kasoo kala geeda Gobolka Hiiraana, Bay iyo Bakool.
Nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xarago oo ah afhayeenka nabadoonada gobolka Bari ayaa xalay ku hoyday xabsi ay leeyihiin Ciidamada amaanka mamaulka Puntiand kadib markii lasoo xiray xili uu kusii jeeday Deegaanka Waaciye .
Sida aan Wararka ku heleyno Nabadoonka ayaa loo xiray hadal uu Warbaahinta ka sheegay xili uu booqday xabsi ay ku xirnaayeen 7-nin oo lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen Al Shabaab , waxa uuna sheegay in ragaasi xabsiga jir dil xun loogu geesto si xuna loola dhaqmo.
Magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay banaan bax looga soo horjeeday xariga Nabadoon Xarago, waxa ayna shacabka ugu baaqayeen maamulka Puntland in si deg deg ah xabsiga looga sii daayo Nabadoonka la xiray.
Nabadoonka ayaa shali Idaacadaha ka sheegay in Maxaabiistaas ladulmiyay laguna qasbay inay sheegtaan Alshabaab. Nadoonkaan inta aan laxerin ayaa sheegay in caradii Alle ee ka imaanayso umadda la iska eedeynaayo kadibna la iska dillo, Nabadoonkaan ayaa Dowlada Soomaaliya iyo Hey´adaheeda ka codsaday in baaritaan dhaaqaatiir lagu sameeyo dhalinta ee putland toogashada ku xukuntay.
Maamulka Puntland ayana wali ka hadlin xariga loo geestay Nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xarago oo kamid ah Nabadoonada ugu saameynta iyo taageerada badan gobolka Beri, Maamulka Putland hadda waxaa hogaamiya mid dhimarka la´i, Allaahna ka furtay kaas oo inta uujoogay Boosaaso iyo Gaalkaciyo lagu dilay dad badan oo ah Siyaasiin reer Putland kuwaas oo lagu dilay magac shabaab.
Previous PostDaawo Sawirro: Maxaad ka taqaan dalka kaliya caalamka ee dadkiisa ka mamnuucay Cabista Sigaarka? Next PostS/land oo muujisay wal walka ay Ka Qabto saameyn uu ku yeelan doono Madaxweyne ee Farmaajo ? (Muuqaal!